Habka dhulka ee dhijitaalka ah ee Google Earth - Geofumadas
Maarso, 2009 Google Earth / Maps, topografia
Valery Hronusov waa abuuraha codsiga kml2kml, waxaa xiiso leh in maanta uu daabacay qoraal ah taas oo Google ay ku talinayso, la yaab leh laakiin aanad ogeyn waxa dalabkaaga uu sameeyo miisaamaan kaliya 1MB.
Waqti hore ka hor ayaan ka hadlay sida loo sameeyo wax sidan oo kale ah AutoCAD, iyo sidoo kale ContouringGE . Aynu aragno sida codsigan ugu shaqeeyo waxyaabo fudud sida soo saarista qaab dhul dijitaal ah.
Tani waa Lake Yojoa, oo ah meel dhowr toddobaad ah maalmaha fasaxa ah ee fasaxa xagaaga xagaaga, dhinaca bidixda ah ee la ilaaliyo ee buurta Santa Barbara iyo asalka asalka ah ee aad ku aragto bada Atlantic.
Soo dejinta Kml2kml waxay qaadataa 15 ilbiriqsiyo rakibidduna waxay qaadataa mid kale 15. Hagaage, uma baahnid inaad waxbadan ku rogto arjigan, kaliya waa inaad ka doorataa "3D dusha" xulashada qalabka falanqaynta oo buuxi xogta galka la soo bandhigay. .
Shaxda koowaad waxay na siinaysaa ikhtiyaarka ah in la doorto ilaha, kiiskan Jtereerrain.
Kadibna waxaad ku xiran kartaa cabbirka shabakada, kiiskan waxaan siin doonaa 50 kasta labadaba labadaba labadaba.
Si aad u hesho qabashada Google Earth, "Helitaanka xaadirada hadda" ayaa la xushay, inkasta oo aad sidoo kale kuugu soo geli karto xogta.
Ka dibna guddiga xiga wuxuu tilmaamayaa haddii aan dooneyno in aan dhalinno mesh ee dhibcaha, silhouette ee qaabka, dusha, wareegyada iyo haddii aan dooneyno tayada asal ahaan asalka ah.
Sidoo kale dhinaca ugu hooseysa waa meesha ay ku qoran tahay gawaarida loo yaqaan 'kmz.
Kadibna guddiga saddexaad wuxuu ka kooban yahay magacyada lakabka iyo midabada buuxiyo. Waxay noqon kartaa jaalle, cabirka dhibcaha ama dhumucda khadka ayaa sidoo kale lagu qeexi karaa.
Taasina waa intaas. Mar alla markii aad riixdo badhanka Shirqoolka, Google Earth faylka kmz ayaa lagu abuuray wax walba.
Khadadka dusha sare, dusha, dhibcaha, sawirka lagu hagaajiyay dhulka. Cajiib ah. Si aad u aragto buuxinta waxa fiican inaad ku soo bandhigto Google Earth foomka openGL.
Xaaladdan oo kale ayaan ka hadlay kaliya qaabeynta dhulalka iyo jiilka xuduudaha badhitaanka laakiin codsigan wuxuu u adeegayaa ujeedooyin kale oo badan. Kml2kml waad awoodi kartaa download si loo tijaabiyo maalmaha 7, iyo haddii aad ku kalsoon tahay iibso waxaa kaliya oo ku kacaya $ 50.
Badeecadani waa la joojiyay. Waad isticmaali kartaa PlexEarth si ay u shaqeeyaan qaababka dijitaalka ah ee Google Earth.
Post Previous" Hore Maanta 8: 30 PM
Post Next Caqabadaha cusub ee ku saabsan siyaasadda faafinta xogtaNext »
10 Jawaabo "Naqshad dhuleed dhijitaal ah oo Google Earth ah"
miyaad i siin kartaa macluumaad qaar ka mid ah Ar Gis
Lakabka dhulbeereedku wuxuu ka shaqeeyaa menu sare.
Dhibaato isku mid ah ayaan qabaa halkan
Xaaladda xogta shidaalka: Xogta lama buuxiyo
Waxaad ii sheegtaa meesha aan raadiyo lakabka dhulka si ay u dhaqaajiso? Tani ma ku yaal Google Earth ama daaqada kml2kml?
Waxaan xiiseynayaa dhulka haddii aad ka heli karto dhismayaasha?
Haddii ay sidaas tahay, waan isku dayi doonaa inaan soo dejiyo.
Waa inaad noqotaa mid gaar ah, waxa 3d faylkaaga aad ku tilmaamayso, mid hore u jirey ama aad rabto inaad ka sameyso Google Earth
limo isagu wuxuu leeyahay:
sida aad u soo saari karto xuduudaha faylka 3d ee qaybta tijaabada ah.
Sharp: Tani waxay la shaqaysaa nooca bilaashka ah ee Google Earth.
halkan: waxaa laga yaabaa in ay tahay sababta oo ah inaadan firfircooneyn lakabka dhulka, waa midka ugu dambeeya ee dhinaca bidixda.
halkan isagu wuxuu leeyahay:
Mmmm, ma garan doontid sababta aan u helay, xogta lama raro… Ma rarri karo, waxaan ku dhuftay aragtida hadda jirta, waxna iima sheegayo in… xogta aan la rarin… .. Maxaad u garan weyday?
fiiqan isagu wuxuu leeyahay:
Haa, version Google Earth waxaan u baahanahay inaan u adeegsado codsigan.
Midka bilaashka ah ama kan qaata ...
Dhibaatada Zombie isagu wuxuu leeyahay:
Iskudhaca xiisaha leh ee Google Earth, haddii Google uu si rasmi ah ugu daro in uusan bixineynin in ay qaali tahay = /